Wayzọ kachasị mma iji gaa site na Amsterdam gaa Berlin Site Ọzịza | Save A Train
Home > Travel Europe > Wayzọ kachasị mma iji gaa site na Amsterdam gaa Berlin Site Ọzịza
Wayzọ kachasị mma iji gaa site na Amsterdam gaa Berlin Site Ọzịza
Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 15/05/2020)
Iji ụgbọ oloko si Amsterdam gaa Berlin na-enye onye njem ahụ ahụmahụ na-agaghị echefu echefu na nhọrọ kachasị mma nke Eco. Ọ bụ ezie na isii hour njem bụ a bit ngwa ngwa, nkasi obi awa site ụgbọ oloko na amara nke njem dị ịrịba ama. na mara mma n'ụzọ, na a ụgbọ ala erimeri aka gafere oge, njem na-agwụ ịbụ ukwuu karịa na-atụ anya. Ebe a bụ ihe ụgbọ oloko na Europe awade maka nke a ụzọ.
Obatara na oge a na Hauptbahnhof (HbF) mgbe ị na-eme njem site na Amsterdam gaa Berlin ma ọ bụ Berlin na-aga ụgbọ okporo ígwè na Amsterdam, ọ bụ ike inweta obi ụtọ banyere njem ahụ dị n'ihu. The ebe bụ a ígwè Ọdịdị na ọtụtụ ala, ebe ụgbọ oloko agafe n'elu isi gị site na kwụsịtụrụ rails. Ọ bụ nnọọ nke ọma ejikọrọ na fọdụrụ n'obodo site Metro edoghi na ụgbọ ala ebe, na etiti nke Berlin. Ọ bụrụ na ị gbaa akwụkwọ ulo ke Berlin, a ezi nhọrọ dị nnọọ a nkeji efep ebe bụ InterCity Hotel.
Berlin Ka Amsterdam Site na Ọzụzụ
Mgbe ị jiri ụgbọ oloko si Amsterdam gaa Berlin, unu na-abanye ma ama Central Station na Amsterdam, otu n'ime ndị kasị Ịta ụlọ nke obodo, nakwa dị ka ọdụ ụgbọ nke Schipol. Easily inweta, na Central Station e wuru na 1889, na taa na-enweta banyere 250,000 njem kwa ụbọchị. The ojii na-nnọọ nke ọma signposted. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu Dutch, cheta na aha ikpo okwu “track”. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, i nwere ike chatter ụfọdụ English, ebe ọ bụ na-arụ ọrụ nke ebe na-ekwu okwu asụsụ. na Amsterdam, a ezi nhọrọ nke ulo nso Central ọdụ bụ Ibis Style. Ebe ahụ, ọnọdụ zuru okè n'ihi na ụgbọ okporo ígwè bụ nri na center, nso ebe mmasị.
Brussels na tiketi ụgbọ elu Amsterdam
London na Amsterdam tiketi
Amsterdam ka Berlin ụgbọ oloko
Paris na tiketi ụgbọ elu nke Amsterdam
Amsterdam Iji Berlin Site Train
Thegbọ okporo ígwè nke Amsterdam gaa Berlin site na ụgbọ oloko na-agakarị, na e nwere ihe abụọ ụgbọ oloko kwa hour. Ọtụtụ ụbọchị ụgbọ oloko na-enye a nnọọ ala ọrụ, ma a bit ngwa ngwa, dị ka ha na-akwụsị n'ọtụtụ obodo n'ụzọ. The mbụ ụgbọ okporo ígwè si Amsterdam na Berlin napu apu na 6:58 m, bịarutere na German isi obodo na 13:20. Site Berlin ka Amsterdam, mbụ ụgbọ okporo ígwè napu apu na 06:37 na-abịarute na 13:08. The akụkụ kasị mma nke njem n'oge ụbọchị, enweghị a doro anya, bụ Okirikiri. Obere obodo na ime nke Germany na Netherlands, nakwa dị ka ugwu na ime obodo Okirikiri, nnọọ breathtaking!
Amsterdam na Brussels train train
Amsterdam na London ụgbọ elu tiketi
Berlin na tiketi ụgbọ oloko nke Amsterdam
Amsterdam gaa Paris ụgbọ elu tiketi
The aba nhọrọ na ụgbọ okporo ígwè ahụ si Amsterdam na Berlin na-iche iche. Ndị a àmà si ot oche ntụ oyi cabins nwere nọ na-eri oche na ọbụna tọghata akwa. Ebe ọ bụ na njem bụ ogologo, njem na otu n'ime ndị a cabins, nke awade mgbakwunye dị ka ìhè, okpomọkụ akara na plọg maka laptọọpụ na mobile phones, nke na-eme ka o kwe omume na-ekiri fim na nkasi obi gị ụlọ n'oge dum njem. Cheta ịzụta gị tiketi dịkarịa ala izu abụọ tupu ka i jide n'aka na ọ dịghị nsogbu na-eme.
Anyị bụ ndị kasị maa n'aka na ị ga-akpọ isiala nye ndị ịnyịnya si Amsterdam na Berlin, na Anglịkan. Ee, a ga-enwe ọzọ njem n'ihi na mgbe ị na-agbalị ya na oge mbụ, ị ga-achọ mgbe nile na-ụgbọ okporo ígwè ọzọ na n'ụzọ zuru ezu na-enweta na njem.
Ya mere, ị dịla njikere ụgbọ okporo ígwè njem n'etiti ụgbọ oloko na Netherlands na Germany? ọ bụrụ na ị chọrọ akwụkwọ ụgbọ oloko anyị ka anyị banye na ya 3 nkeji, na ndị dị ọnụ ala udu na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famsterdam-berlin-train%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / nl ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
Train Travel travelamsterdam travelberlin travelgermany nje ndi njem traveltips
Best Oke Adọrọ Mmasị Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe
Best Canal Ma River Boat Ememe Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe